Table chitsiko, Coffee Table, Lounge pasofa - Yezhi
Wholesale Natural Eco-ushamwari Unique Design Lo ...
Yezhi ari mukugadzira kambani, tichibatanidza design, kudhinda uye vachitengesa kupinda rimwe core. Makasitoma ayo zvinobva pose, kunyanya kusanganisira America, Australia, Britain, Italy uye Canada. The fekitari ano riri mu Mingzhu Industrial Park, Conghua dunhu, Guangzhou pamwe mishumo 40.000 ㎡ , kuvakwa nzvimbo 80,000 ㎡ . Pane zvachose 300 vashandi pamwe wegore goho pamusoro 360,000pcs. Uye musoro muhofisi yayo huru Guangzhou.
The wa25 China International Furniture Expo
Chii garandi rako?